कनकाई « तपाईंको साझा इजलास
बालबालिकासँग बंगाली सेवा समाजको असार १५
संगीता उप्रेतीसुरुङ्गा । नमुना विद्यालयका रूपमा प्रस्तावित कनकाई नगरपालिका–३ स्थित कनकाई माध्यमिक विद्यालयको अभिभावक भेलाले शिक्षक अभिभावक संघ (पीटीए) अध्यक्षमा रमेश शेर्पा (दावा शेर्पा) लाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्न सकिन्छ : प्रा.डा. लुइँटेल
सुरुङ्गा । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा. विनोद लुइँटेलले सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षासेवी र शैक्षिक अभियन्ताको साझा प्रयत्नबाट सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्न सकिने बताएका छन् । कनकाई नगरपालिकाले आयोजना गरेको
७३ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुतकनकाई । झापाको कनकाई नगरपालिकाले आ.व.२०७९-८० का लागि चालु तथा पुँजीगत तर्फ कुल ७३ करोड ८५ लाख ६१ हजार ४ सय २० बराबरको सीमाभित्र रही
चुरे संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको चासो
कनकाई । चुरे संरक्षण गर्न सके त्यसको आसपासमा रहेका बासिन्दाहरुको उचित संरक्षण हुने सुरुङ्गामा आयोजित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बताइएको छ । बुधबार चुरे उत्थानशील आयोजना (बीआरसीआरएन) क्षेत्रका आदिवासी जनजाति संघ
कनकाई उद्योग वाणिज्यमा चर्कियो विवाद
कनकाई । कनकाई उद्योग वाणिज्य संघको २०७८ फागुन २० गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट बनाइएको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न नगरी राजीनामा दिएको छ । निर्वाचन समितिले संघको कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट
कनकाई उधोग वाणिज्य संघको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो
बिर्तामोड । कनकाई उधोग वाणिज्य संघको वैधानिकतामाथि व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचन सकिएको ४५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ९० दिनसम्म सपथ समेत गराइएको छैन । सपथ
हेप्पीलेण्डले अहिलेसम्म कर नबुझाएको खुलासा
लीलाराज झापालीझापा । झापाको कनकाई नगरपालिका ३ र २ को सिमामा संचालित हेप्पी लेण्ड फनपार्कले कनकाई नगरपालिकालाई कर नतिरी करौडौ रुपैँया आम्दामी मात्रै लिएको सार्वजनिक भएको छ । फनपार्कका संचालक
बिर्तामोड । झापा कनकाई नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्र पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न मतगणना अनुसार पोखरेल निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार आशा शर्मा
कनकाई १ मा एमालेको प्यानलै निर्वाचित
बिर्तामोड । कनकाई नगरपालिका वडा नं. १ मा नेकपा एमालेको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ । भर्खरै घोषणा गरिएको परिणाम अनुसार एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वार सुशिल कुमार पोखरेल निर्वाचित भएका छन्